स्वास्थ्य पेज » आज विश्व क्यान्सर दिवस:क्यान्सर भएको कसरी थाहा पाउने? आज विश्व क्यान्सर दिवस:क्यान्सर भएको कसरी थाहा पाउने? – स्वास्थ्य पेज
आज विश्व क्यान्सर दिवस:क्यान्सर भएको कसरी थाहा पाउने?
अध्ययनहरुकाअनुसार क्यान्सरका कारण ज्यान गुमाएकामध्ये २२ प्रतिशत सूर्तीजन्य पदार्थ सेवनका कारणले हुने गरेको पाइन्छ ।
नेपालगन्जः क्यान्सरबाट हुने मृत्युलाई कम गर्न विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै आज विश्व क्यान्सर दिवस मनाइँदै छ । विश्वमा हुने कुल मृत्युको करिब १३ प्रतिशत मानिस कुनै न कुनै क्यान्सरका बिरामी रहेको डब्लुएचओको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।
– धुमपान गर्नुहुँदैन।
– रक्सीको सेवन नगर्ने।
– शरसफाइयुक्त खाना खाने।
– आहारमा अधिक बोसो नलिने।
– रेडिएशनको सम्पर्कबाट जोगिने।
– नियमित व्यायम गर्ने।
– शरीरको तौल सामान्य बनाइराख्ने।
– हैरानी आउँदा डाक्टरसँग सल्लाह लिने।